Wafdi Uu Horkacayay James Swan Oo Gaaray Magaalada Baydhabo. |
Wafdi Uu Horkacayay James Swan Oo Gaaray Magaalada Baydhabo.
Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Baay waxaa Maanta gaaray wafdi uu hoggaaminayo Wakiilka Qaramada Midoobey u qaabilsan Arrimaha Soomaaliya Amb, James Swan, iyada oo halkaasi lagu soo dhaweeyay.
Wafdiga ayaa waxaa garoonka diyaaradaha shaati Gaduud ee Magaalada Baydhabo kusoo dhaweeyay Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Casiis xasan Maxamed ( laftagareen) iyo Xubno ka tirsan Maamulka Koonfur Galbeed.
Intaasi kadib Madaxweynaha Koonfur Galbeed & Wakiilka Qaramada Soomaaliya Amb, James Swan ayaa xarunta Madaxtooyada waxaa ay ku yeesheen kulan ay kaga hadleen arrimaha la xiriira doorashooyinka uu muranka ka taagan yahay iyo sida looga gudbi karo caqabadaha jira.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Casiis xasan Maxamed ( laftagareen) ayaa la sheegay in uu maalmahaan waday dhex dhexaadin ku saabsan muranka doorashooyinka, isla markaana sigaar ah uu kala hadlay Madaxweynayaasha Jubbaland & Puntland.
Wakiilka Qaramada Midoobey u qaabilsan Arrimaha Soomaaliya Amb, James Swan ayaa wararka aan helnay waxaa ay sheegayaan in sidoo kale uu booqan doono dowlad goboleedyada kale ee dalka, isaga oo kala hadli doono xalka gaarista arrimaha doorashooyinka dalka.
Khilafka la xiriira Arrimaha doorashooyinka Soomaaliya ayaa weli taagan, kaas oo ka dhashay Guddiga doorashooyinka ay dowladda Magacaawday, waxaana uu xoogeystay markii Xukuumadda Soomaaliya ay ku dhawaaqday in la bilaabayo hirgelinta doorasho hal dhinac ah oo ay ka maqan yihiin Jubbaland & Puntland.
Sidoo kale dadaalkaan xal raadinta ah ee uu bilaabay Wakiilka Qaramada Midoobey u qaabilsan Arrimaha Soomaaliya Amb, James Swan ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli uu fashilmay Jadwalkii labaad ee doorashada Aqalka Sare oo ay soo saareen guddiga lagu muransan yahay ee doorashooyinka dadbadan.